Waa kuma madaxweynaha cusub ee Koonfur Galbeed? - BBC News Somali
19 Disembar 2018
Xigashada Sawirka, GOOBJOOG
Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen)
Wuxuu leeyahay hal xaas iyo saddex carruur ah. Waxbarashadiisii dugsiga hoose, dhexe iyo sare wuxuu ku qaatay isla degmada Luuq. Wuxuu Luuq ka ahaa macallin iskuul. Magaalada Muqdisho ayuu jaamacad ka dhigtay. Xilal badan ayuu na dowladihii dalka soo maray ka soo qabtay.
Arrimaha ku gadaaman doorashada maamulka Koofur Galbeed - Soomaaliya.
Mukhtaar Roobow oo weli Xiran iyo Ololaha Doorashada Koonfur Galbeed oo halkeedi ka sii socota
Doorashada Koonfur Galbeed
Sida uu doorashada ugu guuleystay
Doorashada Koonfur Galbeed ayaa waxaa aad ugu jala qeybsamayay siyaasiyiinta iyo bulshada maamulkaasi.Dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo ay ka mid yihiin wax garadka ayaa in muddo ahba ku celcelinayay in Cabdicasiis Lafta Gareen uu yahay siyaasi ay gadaal ka riixeyso Dowladda Federaalka, iyagoo arrintaasna ku qeexay fara galin lagu sameeyay hannaankii doorashada.
Dad kale waxay ku doonayaan in dowladda dhexe ay waddada u xaartay siyaasigan si uu xilka ugu hanto qaab sahlan.
Waxyaabaha ay ku doodayaan waxaa ka mid ah in labadii siyaasi ee loollanka adag galin lahaa ay meesha ka baxeen.
Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed ayaa is casilay doorashadana isaga haray ka dib markii uu ka cawday cadaadis siyaasadeed oo la saaray.
Sidoo kale maalmo yar ka hor xilliga doorashada loo ballansanaa, waxaa xabsiga loo taxaabay Mukhtaar Roobow, oo loo arkayay inuu ka mid ahaa musharraxiinta ugu cad cad doorashada, shakigana galin karay inuu xilkan ku soo baxo Cabdicasiis Laftagareen.
Cabdicasiis Xassan Maxamed Lafta Gareen oo cod aqlabiyad leh ugu guuleystay doorashada xilka madaxweynaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaa sida muuqata hor yaalla caqabado waaweyn oo saameyn ku yeelan kara maamulkiisa cusub.
Arrinta ugu horreysa ee uga baahan in uu xal u helo ayaa ah amniga gobolka, gaar ahaan magaalada Baydhabo, halkaasi oo ay maalmihii la soo dhaafay ka dheceen xasarado salka ku hayay doorashada, iyadoo haddana wali ay walaac xooggan muujinayaan qaar ka mid ah shacabka.
Qodobka labaad ee madaxweynaha cusub shaqada badan uga baahan ayaa ah sidii uu u soo af jari lahaa kala qeybsanaanta baahsan ee ka dhex jirta siyaasiyiinta iyo bulshada ka soo jeeda Koonfur galbeed, kuwaasoo qaarkood ay si weyn uga soo hor jeedaan doorashadiisa.
Shan musharrax oo ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka ayaa kula loolamayay xilkan, waxayna horay u tabanayeen cabashooyin ku qotoma awooddiisa siyaasadeed.
Maxay dowladda UK u diiddan tahay European Super League?
Dagaal u dhexeeya Oromada iyo Amxaarada oo Itoobiya ka dhacay